dailynews.blaogy | Ankapobeny
Tao anaty restaurant ngeza tokoa izay miendrika fijerena baolina basikety ny tao anatiny. Misy seza avo ho an ny mpanotrona ny ankilany ary ny andaniny kosa dia toa babangaona ihany hafa tsy ilay comptoir fanankalozana vola etsy ampita. Ilay comptoir dia miendrika pilopitra fitorianteny...
Raha tsy nitsangana hono Kristy Jesoa dia ho foana ny finoantsika Marina loatra izany. Efa nandray io Atra velona izay naharesy ny fahafatesana io ve ianao? Raiso Izy fa tsy hanenina mandrakizay ianao. Ary hilaza ihany koa fa hitako ny lalantsara ka hizorako Fa izao, na...
Aza adino fa ny fanahy aloha no zava dehibe vao ny ara nofo. Katsaho aloha ny fanjakan Atra dia hanampy anao ny zavatrra rehetra. Koa raha hivavaka ho an ny olona dia aza maika fotsiny amin ny hoe tahio izy Tompo o fa mampalahelo be na hoe tahio izy Tompo o fa maditra be… . Fa raha...
Vonoan' Olona ( nofy faha- 8)
Efa hariva ihany ny andro t@ izay. Nitsofoka t@ parking moramora aho fa saika hanajanona ny tomobilina noentiko. Nony nitsofoka tao anefa aho dia taitra sy nangovitra nony tonga saina fa teo anelanelan ny tomobilina izay nijanona teo, izay marihina fa mainty daholo ny lokony dia ...